के हो क्यालोरी भनेको ? | Ratopati
photo: Weight Loss Resources
० दुई वर्षको अन्तरालमा मेरो तौल स्वाट्टै बढ्यो । पहिले लगातार ५७ केजी तौल रहेको ५ फिट ५ इन्चको उचाई रहेको मेरो शरीरको तौल बीचमा ६२ केजी हुँदै अहिले ७० किलो बन्न पुग्यो । सबैले म बेसी मोटाएको ठहर गर्दै तौल घटाउन सल्लाह दिए । उनीहरुले के कुराको पनि सचेत गराए भने, बेसी मोटाएपछि मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मुटुको अन्य रोगहरु लाग्ने खतरा पनि बढ्दै जान्छ ।
० तपाईं हामीले प्रायः सुन्ने गरेका छौं– हामीलाई दिनको यति क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ । अथवा, आलुमा यति क्यालोरी हुन्छ, सागमा यति । मासुमा यति क्यालोरी हुन्छ, गेडागुडीमा यति । नव युवाको गतांकमा पनि तपाईंहरुले केही खानेकुराहरुमा कति क्यालोरी हुन्छ भन्ने बारे संक्षिप्त जानकारी छापिएको याद गर्नुभएकै होला ।
मान्छेलाई बोसो लाग्नुको रहस्य !
केही मान्छे कमजोर भयो वा दुब्लो पातलो भयो भने हामी सामान्य रुपले भन्ने गर्छौं– खानामा क्यालोरी पुगेन जस्तो छ । यसरी, सामान्य भाषामा भन्दा हामी क्यालोरी भनेको शक्ति वा तागत भन्ने बुझ्छौं । तर वास्तवमा, के क्यालोरी भनेको शक्ति नै हो त ? सामान्य अर्थमा बुझ्दा वा भन्दा एक किसिमले क्यालोरी भनेको शक्ति नै हो । तर ठोस रुपमा भन्दा क्यालोरी भनेको शक्ति वा ताप नाप्ने इकाईको नाम हो । एक क्यालोरी भनेका एक ग्राम पानीलाई एक डिग्री सेन्टिग्रड तापक्रममा ल्याउन लाग्ने बराबरको शक्ति हो । तपाईको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ , त्यसो हो भने कुराहरुमा चाहिँ किन क्यालोरी शब्दको प्रयोग गरिन्छ त ? वास्तवमा, खटाइएका प्रत्येक खानेकुराहरु हाम्रो पेटभित्र पैदा गर्छ । उदाहरणका लागि, एक ग्राम प्रोटिनले चार क्यालोरी दिन्छ । त्यसैगरी, एक ग्राम चिल्लो पदार्थले नौ क्यालोरी पैदा गर्छ । एउटा मान्छेलाई एक दिनमा कति क्यालोरी चाहिन्छ ? याो कुरा मान्छेले गर्ने काममा भर पर्छ । एउटा ६८ किलोग्राम तौल भएको मान्छेले केही काम नगरी बस्ने हो भने उसलाई दिनभरीमा १,६८० क्यालोरी चाहिन्छ । त्यही मान्छेले सामान्य काम गर्यो भने, ३,३६० क्यालोरी र अलि बढी मेहनत पर्ने काम गर्यो भने उसलाई ६,७२० क्यालोरीको जरुरत पर्छ । त्यसो त मान्छेलाई कति क्यालोरी चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिको उमेर, लिंग शरीरको आकार, शारीरिक अवस्था, वातावरणजस्ता कुराहरुमा पनि निर्भर गर्छ । मान्छेले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी क्यालोरी लियो भने चाहिँ के होला त ? मान्छेले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी क्यालोरी लियो भने, त्यसलाई भविष्यमा प्रयोग गर्नको लागि शरीरले संचित गर्न खोज्छ । तर यस क्रममा हाम्रो शरीरले प्रतिदिन चाहिने क्योलोरीको एक तिहाई भाग मात्र संचित गर्न सक्छ । फलतः बढी क्यालोरीहरु बोसोमा परिणत हुन थाल्छ । मान्छेहरुमा बढी बोसो लाग्नुको खास रहस्य पनि यही नै हो । नेपालीमा एउटा उखान छ नि– ‘भात नपचेर बोसो लागेको ।’ के यो उखान ठीक छ त ? माथिको कुरा पढेपछि तपाईँ के भन्नु हुन्छ ?